Fisamborana :: Fiara iray voahodidina polisy teny Soanierana • AoRaha
Fisamborana Fiara iray voahodidina polisy teny Soanierana
Nosakanan’ny polisy teo amin’ny toby fivarotan-dasantsy, teny Soanierana, ny fiara tsy mataho-dalana iray, omaly tolakandro. Fantatra fa fisam­borana olona ahiahiana ho olon-dratsy no nitranga,
tamin’io fotoana io. Tsy nahe­noana fanazavana kosa ny isan’ireo olona nosamborina sy izay noentin’ny polisy natao famotorana.
Vetivety dia nitangorona ny olona tamin’ny fahitana fiara tsy mataho-dalana iray voahodidina mpitandro ny filaminana teo amin’ny tobin-dasantsy. Nisy nahazo sary maneho ny fihetsika rehetra nandritra ny fisamborana ny olona teo amin’ny manodi­dina. Nahitana fiaran’ny polisy miloko maitso teo akaiky teo. Fantatra fa polisy avy ao amin’ny hery vonjy taitran’ny Polisim-pirenena (Uir) etsy Tsaralalàna ireo
niatrana teny an-toerana ireo. Nisy ny nanao fanamiana sivily sady nitazona basy poleta. Nisy kosa nisarontava niaraka tamin’ny basy «Kalachnikov». Hita tamin’ny horonantsary azo teny an-toerana fa lehilahy iray mpamily no tazana nivoaka tao anatin’ilay fiara tsy mataho-dalana. Tsy nisy ny poa-basy sy fampiasan-kery. Tsy mbola nanome vaovao feno momba an’izao fisamborana teny Soanierana izao ny avy eo anivon’ny sampana misahana ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny Polisim-pirenena, raha noezahina nakana fanampimbaovao, omaly. Nambaran’izy ireo fotsiny fa «raharaha mafana io raharaha io. Vao manomboka izao ny dingana rehetra momba ny fanadihadiana amin’izany. Nirahina nanao ny fisamborana fotsiny ihany ny polisin’ny Uir». Ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny Polisim-pirenena kosa no nahafantarana fa « resaka trafikana fitaovam-piadiana, toy ny basy sy bala, no nahatonga an’iny hetsika iny. Ny polisy ao amin’ny sampana misahana ny fiarovana ny sisin-tany no tompon’ny fanadihadiana».
Rakibolana ho an’ny mpianatra :: Namoaka ny « Vitasoa » amin’ny endriny kely ny Edisiona Ambozontany
Fahafatesana mpanao politika :: Nodimandry i Manandafy Rakotonirina
Fitsidihana tany ivelany :: Nanazava ny vokatr’ireo fiaraha-miasa iraisam-pirenena ny Filoha